Barafuunka oo la ogaaday in uu qeyb ka qaato Galmada Sir muhiim ah. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Barafuunka oo la ogaaday in uu qeyb ka qaato Galmada Sir muhiim ah.
Barafuunka oo la ogaaday in uu qeyb ka qaato Galmada Sir muhiim ah.
Thursday, September 28, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Warbixin dhawaan la soo saaray ayaa sheegeysa in Barafuunka ,gaar ahaan kan Carafta badan uu qeyb weyn ka qaato arrimaha Galmada ,sidaas daraadeed ,waxa ay qubarada ay sheegayaan in muhiim ay tahay in ay badsadaan qoyska laamanaha xilliga habeenkii ah.
Nelmon Mesion oo ah gabar u dhalatay dalka Jabaan ayaa tilmaameysa in hammi badan o dhinaca galmada ah uu keeno Barafuunka ,marka lagu guda jiro xilliga galmada ‘Sidaas daraadeed ,waa in ay gabadha is ticmaashii xilliga hurdada ,sidoo kalana uu Ninka raga ah isicmaalaa isagana” sidaas waxaa yiri Nelmon Mesion.
Isku soo wada duubo Warbixintan ayaa waxa ay iftiimeynesaa in Barafuunka carafta badan ay badsadaan laamanaha xilliyada hurdada si uu u kordho Galmada ay sameyanayaan.